WAR CUSUB: Maxaa ka jira in beello lagu gacan-bixiyeeyay Shirweynaha ka socda Dhuusamareeb? & Ugaas xaqiiqda sheegay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR CUSUB: Maxaa ka jira in beello lagu gacan-bixiyeeyay Shirweynaha ka socda...
WAR CUSUB: Maxaa ka jira in beello lagu gacan-bixiyeeyay Shirweynaha ka socda Dhuusamareeb? & Ugaas xaqiiqda sheegay!
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya, in qaar ka mid ah beelaha degga Galmudug in lagu gacan bidixiyeeyay shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha Galmudug, ee ka soconaya Gobolka Galgaduud.
Ugu dambeyn, cabashadan ayaa waxay ku soo aadaysaa, xilli Dowladda Somaliya ay juhdi ku bixineyso, sidii ay dib u heshiisiin u dhex dhigi laheyd beelaha ballaaran ee deegaanka ku ah Galmudug.
beelo lagu gacan bixixeeyay
Shirweynaha ka socda Dhuusamareeb
Ugaas Xaashi Ugaas Jimcaale